Suuriya oo ciidan hor leh u dirtay deegaanada ay ka socdaan mudaaharaadyada – SBC
Suuriya oo ciidan hor leh u dirtay deegaanada ay ka socdaan mudaaharaadyada
Dimishiq:-Xukuumadda Suuriya ayaa u dirtay deegaanka lagu magcaabo Binyaas ciidamado hor leh iyo baabuurta gaashaaman si loo soo afjaro banaanbaxyada looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Bashaar Al-asad.
Dhanka kale Wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa si kulul u cambaareesay waxa ay ugu yeertay howl galada isku dhex yaaca ah ee ay fulinayaan ciidama Suuriya iyagoo adeegsanaya dabaabado isamarkaana xir xiraya dadka dibad baxa sameynaya.
Afhayeenka wazaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mark Tuner ayaa sheegay in xariga loo geysanayo dadka shacabka ee aanan waxba galabsan iyo rasaasta lagu leynayo ay tahay mid aanan laga aamusi karin wuxuuna ugu baaqay madaxweynaah Suuriya in uu joojiyo dhibaatada uu u geysanayo dadka rayidka ah.
Hey’ad u dooda xuquuqda aadanaha-na waxa ay sheegtay in xukuumadda Siria ay xirtay mudo bil iyo bnar gudeheed ah dad gaaraya 2843 qof , ayna dhinteen 632 qof oo u badan dadka kasoo jeeda magaalada Darca.
Xukuumada Suyuriya waxey ku sheegtay dadka ay xir xireen in ay yihiin dambiileyaal hubeysanaa, xukuumadda Suuriya waxey u qabatay dadka dibad baxyada wada in ay joojiyan ka hor 15-ka bishan May ayna isa soo dhiibeen wixii ka dambeeyana tallabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto.